Mayelana NATHI - Ningbo Rumotek Magnetic Technology Co., Ltd.
Ithimba lethu liqukethe ochwepheshe abathembekile abaqeqeshelwe ukubhekana nazo zonke izici zamaphrojekthi kazibuthe. IRumotek ukufakwa okwaziwayo, inkampani yokuhlola nokunemba okuphezulu ehlanganisa indawo yaseYurophu neNyakatho Melika.
Ithimba lethu likazibuthe likunikeza ukunakekelwa kokufakwa kwakho kukazibuthe nezinto zikagesi. Yonke le nqubo ihambisana ngokuqinile ne-ISO 9001: 2008 ne-ISO / TS 16949: 2009 uhlelo lokulawula ikhwalithi. Onjiniyela bethu ngamunye baqala ukubamba iqhaza kuphrojekthi kazibuthe ngokususelwa kokungenani iminyaka eyi-6 kulwazi lukazibuthe kubandakanya imidwebo ye-CAD, ukwakhiwa kwamathuluzi nokwakhiwa kwemishini nokusetshenziswa, ama-prototypes okuqedela nokuhlolwa. Lokhu kusenza sikwazi ukunikela kuwe amazinga aphezulu wenkonzo yobungcweti kuwe.
Ukuvelela, kuqala ngokuzijwayeza
I-RUMOTEK izibeke embonini kazibuthe njengenye yezinkampani ezihamba phambili ezikhiqiza i-NdFeB, iSmCo, i-AlNiCo, iCeramic neMagnetic Assemblies.
Iqembu labaklami abahle kakhulu lihlukanise umlando wenkampani zisuka nje futhi belilokhu liqondise ukuvela kwemikhiqizo elandela umgwaqo WOKUQALA, UBUDLELWANE NEZIMPAWU NGOKUNGATHOLI.
Iminyaka eminingi ukufakwa kukazibuthe kanye nemishini yokuhlangenwe nakho kusinikeza umbono wezobuchwepheshe nowusizo womhlaba wonke wakho konke okuphathelene nemagnetism.
Izindinganiso ezisezingeni eliphakeme, ukubhekisisa ukwakheka nobuchwepheshe bezohwebo yizithako ezinikeze iRUMOTEK impumelelo yayo eChina nakwamanye amazwe njengomunye wabasebenza ngokufanele kakhulu embonini kazibuthe.
Ukunakekela imininingwane, ukwakheka komuntu siqu, ukukhetha ngokucophelela izinto zokwakha, ukuthuthuka okuqhubekayo kwezobuchwepheshe nokunaka okuphelele ekwanelisekeni kwamakhasimende. Izindinganiso ezisezingeni eliphakeme, ukunakwa okusondele ekuklanyweni kanye nobuchwepheshe bezohwebo yizithako ezenze imikhiqizo kaRUMOTEK ibe ukukhetha okuhle.
I-Rumotek isebenza ngekhwalithi evelele, ukukhiqizwa okuthuthukile, kanye nemiklamo emisha kazibuthe ukunika amandla impumelelo yamakhasimende nokukhula kwenhlangano yethu.
Umbono kaRumotek kufanele ube ngumhlinzeki wezixazululo ezinamandla, onamandla, ohlanganiswe ngokuphelele. Siphayona ukwenziwa kwezicelo nobuchwepheshe ukuvala izikhala abalingani bethu abakhulu bebhizinisi ababhekana nabo ekuthuthukiseni izixazululo ezinqenqemeni.
Isiko likaRumotek linika amaqembu ethu amandla okusungula, ukufunda, nokunikeza izixazululo ezinomthelela omuhle emhlabeni wethu. Imvelo yethu enamandla futhi esekelayo yabantu abenza kahle inothando ngezixazululo esizinikeza amakhasimende ethu. Sitshala imali emaqenjini ethu nasemphakathini.
Umklamo Nobunjiniyela: I-Rumotek inikeza amandla okuthuthukiswa kwensizakalo ephelele isebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene ze-2D ne-3D software yokulingisa kazibuthe. Izinhlobo ezahlukahlukene zama-alloys kazibuthe ajwayelekile agcinelwe ukwenziwa kwesibonelo noma imikhiqizo yokukhiqiza. I-Rumotek idizayina futhi ikhiqize izixazululo kazibuthe zamaphrojekthi ku:
• Izithuthi Tooling
• Ukulawulwa Kokuhamba Kukagesi
• Insizakalo ye-Oyili Field
• Uhlelo Lokulalelwayo
• Ukuphathwa Kwento Yokuhambisa
• Ukwehlukaniswa Komfutho
• Uhlelo lwe-Brake and Clutch
• Izinhlelo Zasemkhathini Nezokuvikela
• Inzwa edala
• Ukufakwa kwe-Thin Film nokuNcijelwa kweMagnetic
• Izicelo ezahlukahlukene zokubamba nokuphakamisa
• Ukukhiya uhlelo lokuphepha